Dowladda Soomaaliya oo ka hadashey Soomaalidii lagu duqeeyey dalka Yemen. - Somalia Focus
Dowladda Soomaaliya oo ka hadashey Soomaalidii lagu duqeeyey dalka Yemen.
by Hassan Ali | Saturday, Mar 18, 2017 | 200 views
18,March,2017(SofoNews) Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Max’ed Cabdi Xayir Maareeye ayaa sheegey in dowladda Soomaaliya ay ka xuntahay dhibaatadaasi loo geystey dadkii Soomaaliyeed oo lagu duqeeyay dalka Yemen.
Waxaa duqeyntaasi ku geeriyootay in kabadan 30 qof oo saarnaa dooni mareysay xeebaha magaalaad Xudeydiya ee dalka Yemen kuwaasi oo ku sii jeediay Suudan si ay uga bad baadaan dagaalada halkaasi ka dhacay.
Wasiirka warfaafinta Soomaaliya aya sheegey in dowladda Soomaaliya ay waddo baaritaano ku aadan sidii dadkaasi loo ogaan lahaa cidda ka dambeysay,duqeynta ayagoo kala hadlay hay’adda QM ee u qaabilsan arrimaha qoxotiga in ay dadkaasi ay dalkooda ku soo celiyaan.
Dhanka kale dalalka Mareykanka iyo Sucuudiga oo ku jira xulufada dagaalka kula jirta falaagada Xuutiyiinta Yemen ayaa ka hadlaya duqeynamahaasila sheegey in loo geystay dad qoxooti Soomaali ah.
Afhayeen u hadlay Isbaheysiga uu hoggaamiyo Sacuudiga oo lagu magacaabo Maj. Gen. Ahmed Al-Assiri ayaa sheegay in weerarkaas aysan geysan diyaaradaha dagaalka Isbaheysiga
Waxaa uu sheegay inay tuhunsan yihiin in weerarkaas ay ka dambeeyeen kooxaha Xuutiyiinta, waxaa uu xusay in ciidamadooda aanay ka howl gelin goobahaas.
Sidoo kale afhayeen u hadlay waaxda difaaca Maraykanka oo la yiraahdo Adam Stump ayaa asna dhankiisa sheegay inay jirin wax hawlgal ah oo ciidamadooda ka sameeyeen dalka Yemen bad iyo barriba 24 kii saac ee lasoo dhaafay.
Diyaarada duqeynta geysatay oo ah kuwa qumaatiga u kaca ee Apache A-64 ayaa ah diyaarad ay heysato Sacuudiga, waana diyaarad uu sameeyo Mareykanka.
Qaar ka mid ah dadkii ka bad baaday weerarkii lagu dilay in ka badan 40 ruux oo Soomaali ah oo sida Q,M sheegtay u socday dalka Sudan ayaa warbaahinta u sheegay in diyaarad nooca qumaatiga u kaca ah oo nooceeduna ahaa Apacha ay rasaas aan kala joogsi laheyn la dhacday doonta.
Dalka Yemen ayaa waxaa muddooyinkii ugu dambeyeey ka soconaya dagaalo u dhexeeya falaagada Xuutiyiinta iyo taageerayaasha dowladda ayadoo ay ka qeyb qaadanayaan dagaalkaasi isbahaysiga oo ay ku jiraan Sucuudiga iyo MAreykanka.
Madaxweynaha Turkiga oo booqanaya Soomaaliya
Baarlamanka Soomaaliya oo ansixiyay qaraar loogu gurmanayo dadka ay abaaruhu saameeyen